Indlela ukuqoqa ngigeza ngezandla zakhe
Area induduzo ezindlini yesimanje kanye zokulala kungaba hhayi kuphela usofa ivulekile phambi TV, kodwa futhi nekamelo lokugezela lapho kungenzeka nje kuphela ukuba bagcine umzimba inhlanzeko, kodwa futhi kuzuzwe nomphumela oqabulayo esebenzisa umphefumulo. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ukuqoqa ezihlukanisa amahhovisi eshaweni.
imiklamo ezintsha zika- CAB yokuthi zikhona ezimakethe nezindlu zangasese, ezihlukahlukene obuningi. Ngakho-ke, abathengi banikezwa ithuba lokukhetha imodeli ukuthi iningi organically angena Interiors zakudala noma ultra-yanamuhla zangasese yabo. Kodwa ezimbalwa abathengi bazi ukuthi ukuqoqa ezihlukanisa amahhovisi eshaweni. Ngokuvamile imema bonke ochwepheshe, okusikisela ukuthi ukufakwa kwalesi imishini liyinkimbinkimbi kakhulu engaqaliwe. Empeleni, noma yimuphi Isikhungo ukwazi ukubhekana lo msebenzi - inqubo yokufaka is hhayi kakhulu lukhuni. Uma namanje abanesifiso sokwazi kanjani ukuba ahlanganise eshaweni, imiyalo eze hardware yakho, kunikeza incazelo eningiliziwe. idivayisi okunjalo kwenza kube nokwenzeka ukudala egumbini lokugezela isimo sezulu onhlobonhlobo, phansi sauna. Ukuthola, inhloko yalo mkhaya bazothini, indlela ukuqoqa ezihlukanisa amahhovisi eshaweni. Leyo mikhumbi eziphambili kakhulu eshaweni ifakwe isilawuli LCD ikhompyutha panel. Indlela ukuqoqa ezihlukanisa amahhovisi eshaweni kunjalo onobuhle 'eziphambili ", umsebenzisi abavamile abakwazi ukwazi. Ukuze afeze imisebenzi enjalo kangcono ukumema onguchwepheshe.
Indlela ukuqoqa ngigeza
Model ngaphandle electronics eziyinkimbinkimbi ukuze amandla ukusetha bebodwa, okuzokwenza kakhulu ukulondoloza. Oku-ukufakwa kufanele kwenziwe endaweni ezahlukene, ukuqinisekisa ukuthi zonke izingxenye, iziqobosho, ukwenza izimbobo ezidingekayo. Bese uqale ukwakha ngqo egumbini lokugezela, plumbed amanzi angcolile isimiso sokukhuculula esebenzisa hoses nezimo. Qala ukwakha ugqoko zangaphambi ayeba imilenze, esaqinisa ku imigoqo okhuni. Khona-ke ihlolwe yobunzima ka hose abakhwabanisi. Isiwombe sesibili - ukufakwa abanikeze asebenza nabo panel, uthango iminyango nge-slide bar. Ukuze usethe i-pan ne-sealant ingilazi futhi abicah asetshenziswa. Lapho umhlangano kufanele bazazi sezindawo ethambile kwensimbi gumbi. Uxhumano amadivayisi kagesi (ukukhanyisa, umlandeli, umsakazo) kungcono ishiyelwe le ngogesi. Lokhu uqeda omningi walo msebenzi. Uma lukhuni, izinto yasibamba efakwe ingilazi iminyango olunegama lika ezinamasondo adjustable eliphezulu, okuyinto kamuva wagqoka ofeleba plastic. Okulandelayo setha ophahleni cab, inhloko eshaweni, kwasemuva ixhunyiwe, umlandeli, isikhulumi kanye izesekeli ahlukahlukene: emashalofini, izibuko futhi isibambo. Isigaba sokugcina - uxhumano nezokuxhumana kudingeka: ugesi, amapayipi amanzi. Njengoba usuyitadishile inhlangano elula yombonisomdwebo ngenhla, ungafunda kanjani ukuba ahlanganise eshaweni, okuyinto eyonikeza induduzo esiphezulu kuwo wonke amalungu omkhaya, ukunikeza izimo inhlanzeko.
Ubukhulu alawo machibi sensimbi: yonke ukunambitheka kanye nesabelomali
Emincane 120x80 pan ongaphakeme: i Uhlolojikelele, izici, amamodeli Izibuyekezo
Yini isiphequluli esheshayo?
Rim ikhiye isithiyo
Bembuzi ubisi: inzuzo noma umonakalo?
Blackcurrant Vologda: incazelo ezihlukahlukene, ukunakekelwa, umkhiqizo kanye nokubuyekeza
Ukukhetha amakhethini umphefumulo
Phila Poplin: ngezibuyekezo eminyaka yomlando
Climate nesikhala imithombo yezwe. Ukusetshenziswa isikhala izinsiza
Kungani amahlamvu oluhlaza? Kungani beyidinga?